ဒေါ်စုဖတ်ဖို့… huffingtonpost | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ဒေါ်စုဖတ်ဖို့… huffingtonpost
Posted by kai on Jun 25, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi | 12 comments
ဒီစာကို ဒေါ်စုဖတ်ခဲ့ရင်.. ဒါမှမဟုတ်..ဖတ်နိုင်တဲ့နေရာကို.. တယောက်ယောက်က.. အောက်က. .ဆောင်းပါး..ပို့ပေးစေချင်မိပါတယ်..
ကျုပ်ကတော့.. Myanmar/Burma ပြဿနာထဲ..၀င်ရှုပ်လိုက်ဦးမယ်..။
“အမေရိကားနေ .. အမေရိကန်မြန်မာတယောက်.. မြန်မာပြည်ပြန်သောအခါ..မြန်မာစာနှင့်မြန်မာစကားကို..မြန်မာလို..မရေးတတ်မပြောတတ်တော့ပါ”ကို.. အင်္ဂလိပ်လို..တယောက်ယောက် ပြန်ရေးတာ..ဖတ်ချင်မိတယ်..
မြန်မာတွေကို.. အင်္ဂလိပ်လိုရေးရင်.. (ကျွန်စော်နံတဲ့..) Burmese သုံးတာကို မကြိုက်တာအမှန်ပါပဲ..။
ရှေးကလို.. Burman သုံးရင်သုံး.. Myanmartian သုံးချင်သုံးပေါ့.
Mars အင်္ဂါဂြိုလ်သားကို.. Martian ခေါ်တာမို့..Adjective လည်း.. Martian ဖြစ်တာမို့.. ..
Myanmar ကို.. လူမျိုးအနေသုံးရင်.. Myanmartian မဆိုးဘူးထင်တာပါပဲ..
အောက်ကဆောင်းပါးထဲက.. Burma/Myanmar ကိုဝေဖန်ကြည့်တာပါ..။
<strong> What The Lady Could Learn From The First Lady</strong>
LONDON–It was the most closely-watched Congressional race of 2000, and the most expensive in the history of the United States. When the dust settled, Hillary Rodham Clinton raised her right hand and took her seat in the United States Senate. As perhaps the most prominent First Lady in American history, and the first elected to Congress, observers excitedly wondered how she would approach an institution ruled by seniority and typically dismissive of new members.
And so, Senator Hillary Clinton-with universal name recognition andanational, even international, support base-kept her head down, worked determinedly to build relationships with former archrivals, and became one of the most popular and effective legislators in the Senate. She made the choice, consciously and conscientiously, to beasenator, notasymbol.
I thought of Hillary’s choice this past weekend, observing the 17-day European tour of Aung San Suu Kyi, the longtime symbol of Myanmar’s struggle for democracy and nowaminority Member of Parliament in the rapidly-reforming Southeast Asian nation, which is what the British renamed Burma.
It was moving, of course, to hear Suu Kyi’s eloquent words as she accepted the Nobel Peace Prize, awarded to her in absentia in 1991. “The Lady,” as she is known in Myanmar, endured 15 long years of on-and-off house arrest after winning and being denied the presidency by the military junta in 1990. She was not released until November of 2010, as Myanmar’s new President, Thein Sein, began systematically and surprisingly instituting political and economic reforms-not because of Suu Kyi or pressure from the West, but to counter-balance the growing influence of China in Myanmar.
The trouble begins, however, when her “victory lap” fuels perceptions of what The Guardian termed “Burma’s tale of two presidents.” Or, asaMyanmar analyst tells me, “Thein Sein is notastrong leader, and Suu Kyi thinks she is not president, but queen.”
In Ireland, Suu Kyi was treated toarock star welcome-literally-with U2’s Bono proclaiming himself “star-struck” ataconcert in her honor. After meeting with both British Prime Minister David Cameron and Prince Charles, Suu Kyi addressed the British Parliament-an honor most recently accorded to President Barack Obama and Pope Benedict. And speaking to the International Labor Organization in Switzerland, Suu Kyi reminded her audience, “I do not stand herearepresentative of the workers, or of employers, or of government,” [charmingly but] somewhat blithely adding, “Not yet, anyway.”
But now, as President Thein Sein has announceda“second wave of reforms” aimed at spurring economic investment in Myanmar, Suu Kyi’s reemergence onto the world stage threatens to confuse Myanmar’s policy and undermine the liberalizing regime.
Her recent warning to foreign oil companies not to do business with the opaque, state-controlled Myanmar Oil and Gas Enterprise, for instance, has displeased the deeply unpredictable regime. Her recent appearance at the World Economic Forum in Bangkok-where she “stole the show” as the Irrawaddy reported-also forced Thein Sein’s sudden withdrawal, in what was to be his coming-out party in East Asia, for fear of being upstaged. Her remarks to WEF delegates-warning against “reckless optimism” on Myanmar’s reforms-reportedly angered former junta members in Naypyidaw.
“The reform process remains heavily dependent on two individuals-Suu Kyi and Thein Sein,” writes Maplecroft senior Asia analyst Giulia Zino. It “has the potential to implode at any time.” The Lady herself echoed this sentiment in her Nobel talk, ironically observing that “one unconsidered move can be enough to remove long-standing ceasefires.”
While the successful return on reforms seems to have led the former military hierarchy to shelve its “Plan B”-no doubtarenewed crackdown and abandonment of the moderate progress made, as Derek Tonkin, Chairman of Network Myanmar, describes it-any perception that Suu Kyi is usurping the authority of the former generals will only encourage them to crush Myanmar’s steps toward democracy.
The University of London’s Marie Lall puts it best: “The trip, and the cheers and the accolades she will receive, are well-deserved for the many years of sacrifice and isolation. However, this is notaculmination ofapolitical career, but rather the start of one.”
As Suu Kyi returns to Myanmar in time for the start of the July4session of Parliament, there are any number of urgent issues MP Suu Kyi can engage in.
While in Europe, she has already fielded questions on the delicate issue of citizenship for the Rohingyas refugees,agroup of 800,000 Muslims on Myanmar’s western border with Bangladesh, where Buddhist-Muslim violence recently killed 29 and displaced 30,000 more. Given her status asachampion for the oppressed, Suu Kyi can playaunique role as Myanmar searches forasolution.
Likewise, the ongoing warfare between the army and Myanmar’s ethnic minority-a state of affairs that has persisted since Suu Kyi’s father, General Aung San, was assassinated before he was able to implement an agreement to peacefully integrate them into the state-threatens the country’s stability. Suu Kyi has the authority and opportunity-working through legitimate government channels-to help establisharoadmap for integration. Inacountry where ethnic minorities have long suffered at the hands of the ethnic Burman majority, her insistence on calling the nation “Burma”-as she did again in her Nobel lecture, despite minority revulsion to the name-doesn’t help.
Finally, though the recent normalization of relations and suspension of some sanctions recently enticed Coca-Cola back to Myanmar aftera60-year absence, other Western companies have been wary of investing. If Suu Kyi joins with the President to promote responsible foreign investment and development, it would goalong way toward aiding the 55 million citizens of Myanmar in poverty while encouraging the regime to liberalize further.
In addressing these challenges and others, Suu Kyi’s voice-always eloquent-will be essential. But it will be magnified most if she uses it not to speak in platitudes for her entire country, but to lay out her principles to the regime, and then collaborate with them to make those beliefsareality.
Last year, when Hillary Clinton, now Secretary of State, became the first top U.S. diplomat to visit Myanmar in 55 years, she spent several hours meeting with Suu Kyi. The two women quickly establishedaclose, personal relationship and were “visibly moved” when they embraced following their meeting.
For Suu Kyi, the best way to move her country forward will be to follow her friend Hillary’s example in the legislature, subordinate her celebrity for the good of the country’s progress and becomeaworkhorse, notashow horse.
ဒေါ်စုဖက်က လက်တွေ့ကျတဲ့ လုပ်ရပ်များနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပီးဗီ၊ နောက်ထပ် လိုက်ရောဖို့ဆိုဒါ စစ်တပိုင်းအစိုးမရ ဘယ်လောက်ထိ အခြေခံကျ မြင်သာတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ပြမလဲအပေါ် မူတည်ပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးမရ အဆက်ဆက် ဥပဒေပြဌာန်း ကတိစကား အမျိုးစုံပေးခဲ့ပီးဗီမို့ ယခုအကြိမ်မှာဒေါ့ စကားလုံးများထက် လက်တွေ့လုပ်ရပ်များသာ အခရာ ကြဗာဂျောင်း စစ်တပ်အလိုဒေါ်ယိသဂျီး သိဈေအပ်သီ။
ဘိုလို ဘယ်လိုမှ မကိန်လို့ ကိန်လို့ဂဒေါ့ ဝင်ဝုတ်ဒယ်
ဟစ်လရီလည်း အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဘ၀ကနေ နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ကိုတရားဝင်ရောက်လာသလို၊ ဒေါ်စုလည်း အမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘ၀ကနေ နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ်တရားဝင်ရောက်လာကြတာချင်းတူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိသိသာသာကွာခြားတဲ့အချက်က၊ အမေရိက ဟာ နှစ်(၂၀၀)ကျော် ဒီမိုကရေစီနဲ့ယဉ်ပါးနေချိန်ဖြစ်ပြီး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒီမိုကရေစီကို ခါးတောင်းကျိုက်လှမ်းကာစ မွေးကင်းစကလေးဘ၀မှာပါဘဲရှိပါသေးတယ်။ အကြံတူရင်နောက်လူသာမမြဲမို့၊ အမေရိကက ဒီမိုကရေစီနဲ့ founding fathers တွေရဲ့မျော်မှန်းချက်ကို နှစ်(၂၀၀)ကျော်အချိန်ယူ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ရပေမဲ့၊ နမူနာကောင်းများကိုလက်တကမ်းကနေ အဆင်သင့်ရယူနိုင်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့လိုက်လျောညီထွေမဲ့ စနစ်ကောင်းတခုဖန်တီးနိုင်မှာမို့၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီလောက်ကြီးအချိန်မကြာသင့်တော့ပါဘူး။ အဲ-တခုဘဲရှိပါတယ်။ စနစ်ကိုဖန်တီးကြသူတွေ စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းဘို့ဘဲလိုပါတယ်။ သမိုင်းကအဆုံးအဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Huffington Post ဟာ နိုင်ငံရေး critic လောကမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားလေးစားခံရတဲ့ သတင်းစာတစောင်ဖြစ်ပေမဲ့၊ ဟစ်လာရီ ရဲ့နမူနာကို ဒေါ်စုကရယူသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြံပြုချက်ကိုတော့။ မောင်မိုးညို သိပ်ဘ၀င်မကျလှပါဘူး။
အီတလီနိုင်တယ် …ဒါဗျဲ ….
နိုင်ငံရေးတော့မဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့ “မြန်မာကို အင်္ဂလိပ်အခေါ် ဗမာ ”
လို့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးတာတော့မကြိုက်တာအမှန်ဘဲ။Myanmar ဘဲဖြစ်သင့်။
အဲဒီ အခေါ်ကတော့ မြန်မရီးစ်(Myanmarese) လို့ သုံးတာ ကြားဘူး သလားလို့။
အဲဒါထက် ပို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက
“workhorse, notashow horse”
ဆိုတဲ့ စကားလေး ကို သဘောကျလို့။
“အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်မဲ့ မြင်းဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ
သူ့ ခြေထောက်ကို သံကြိုးတွေ ပတ်ပြီးချည် ထားလို့ မရဘူး။”
ဆိုတာ ဒီလူ့ ကို ဘယ်လို ရှင်းပြရပါ့။
သံကြိုး တွေ ရှိ နေသမျှ show horse တောင် မတင့်တယ်တဲ့ show horse ဖြစ်နေမှာ။
(မူရင်း – ဂဂ)
korea =한국 Hanguk ဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်အခေါ်ရော မူရင်းအခေါ်အသံထွက်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Burmeseပဲသုံးသုံး Burman ပဲသုံးသုံးMyanmarပဲသုံးသုံး Myanmartian ပဲသုံးသုံး လူအများသိတာကိုသုံးရင်ပိုသင့်တော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်စော်နံတယ်ဆို
တာ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ အတွေးခေါ်လို့ထင်ပါတယ်။ Burman ဆိုတာလည်း အင်္ဂလိပ် ပေးခဲ့တဲ့နာမည်လို့ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် စကားဟာ အခုအချိန်အထိတော့ ကမ္ဘာသုံးဖြစ်တဲ့အတွက် လူတော်တော်များများက Burmese နဲ့ Burma ကိုပဲလူသိများပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူကြီးပိုင်းတွေ က Burma ကိုပဲသိတာများတယ်။ မှတ်မိသလောက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖွဲ့ခဲ့တာဟာ ”ဗမာ့တပ်မတော်”ပါ။ နိုင်ငံကြီးတွေတောင် အင်္ဂလိပ်အခေါ်ကို လက်ခံနေတာပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့် စာနဲ့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားအများ လက်ခံတာရေးနိုင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ Myanmar ဆိုတာကြီးက out of the blue ထပြီးပြောင်းလိုက်တာ။ နိုင်ငံတော်အလံကိုလဲ ဒီလိုပါပဲ။ နာမည်နဲ့အလံသာပြောင်းသွားတယ် တိုင်းပြည်ကြီးကတော့ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော် သိထားသလောက်လေးတွေ ထင်မြင်ချက်ပေးတာပါ။ အမှားပါရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပါ။
( ကျွန်စော်နံတယ်ဆိုတာ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ အတွေးခေါ်လို့ထင်ပါတယ်။ )
ညောင်နှစ်ပင်စခန်းမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရမည့်အခြေခံ မူထဲမှာ
အနာဂတ် နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးတွင် တပ်မတော်မှ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ရေး လို့ ပါပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကလည်း အနာဂတ် နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အောက်မှာ.. ချိုင်းနားကိုခေါ်တာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. အငြင်းပွားနေတာကူးတင်ပါတယ်..။
-ese အဆုံးသပ်တွေက..အင်္ဂလိပ်တွေ.. ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးတုံး.. နှိမ်ခေါ်တဲ့သဘောပါတယ်ဆိုတာပါပဲ..
Chinian, not Chinese?
In an interesting twist on the “Shanghainese” issue, Kevin Keqing Liu at China Daily argues that it’s time to retire “Chinese” in favor of “Chinian”. His reasoning starts this way:
Group I: American, Australian, Austrian, Canadian, German, Italian, Norwegian, Russian…
Group II: Chinese, Congolese, Japanese, Nepalese, Portuguese, Sudanese, Vietnamese…
Not enough to make you feel superior should you fall into Group I, or inferior if you unfortunately happen to be in Group II? Let’s look at the Longman Dictionary of Contemporary English, 1978, for the definition of “-ese”: suffix, 1. (the people or language) belonging to (a country); 2. (usually derogatory) literature written in the (stated) style. Examples: Johnsonese; journalese.
Or MSN Encarta Dictionary online: … 3. The style of language ofaparticular group (disapproving). Example: officialese. [Via Old French -eis; Italian -ese]
He continues the argument:
The English-speaking founding fathers of Singapore were well aware of the subtle significance behind the “-ese” and “-an” distinction, and opted for Singaporean when the nation became independent in 1965.
India hasadifferent story. The Indians stemmed from Europe. Europeans saw Indians as relatives. You wouldn’t want to use harsh descriptions for your relatives, would you?
သဂျီးပြောတဲ့ Chinese ဆိုတာက တရုတ်တို့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို ကလန်ဖို့ ထွင်ထားတဲ့ Pin_Yin ဖင်းန်ယင်ရဲ့ အသံထွက် (စာလုံးပေါင်းမတူ) Chinian နဲ့တူတူများ ဖြစ်မလားလို့ .. နိူ့ပေမဲ့ သဂျီးက အကိုးအကားတွေနဲ့မို့ သိပ်တော့ မပြောရဲဘူး
သဂျီးပြောသလို _ese တွေက အင်္ဂလိပ်တွေက နှိမ်တဲ့ သဘောမျိုးဆို ကိုရီးရမ်းနဲ့ ဂျပန်းနိစ်စ်ကြား အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ဖြစ်မလားလို့..
၀င်သာရေးရတာ မြန်မာလို ရေးတဲ့ အပိုင်းတွေဘဲ ဖတ်ပီးပြောရဲတာ ကျန်တာတွေက ဘာသာပြန်ရင် တနေကုန်မှာမို့ နဂိုကမှ တနေကုန် ၀မ်းဇီးရိုး ဇီးရိုးဝမ်းနဲ့တောင် ဦးနှောက်က ခပ်ခြောက်ခြောက်ရယ် ဆိုတော့..
အချိန်ရရင် အမြည်းသဘောလေး ဘာသာပြန်ပေးပါ သဂျီးရယ် နော် …. နော်လို့ …ဂယ်ပါ
ဖတ်လဲ ဖတ်ချင်ပါတယ် အတည်ပြောတာပါ…….
ဗမာလိုေ၇းထားတာ….နယ်ချဲ့ကပေးထားတာ အင်္ဂလိပ်လို Burma.
အနှစ်သာရခြင်းကတော်တော်ကွာတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွှန်တော်နိုင်ငံပေါင်း ၁၄ နိုင်ငံရောက်ဖူးတယ်။
Burma ကိုမသိတာအများကြီး..(Myanmar ကိုတော့သိတယ်မပြောပါ) ရုတ်တရက်ထပြောင်းတာဆိုတာ
အိန္ဒိယက Bombay မြို့အခု မွန်ဘိုင်းပြောင်းပြစ်တာဘဲ။တစ်ချိန်က ဆီလွန် အခု သီရိလင်္ကာ ကျန်တာတွေမပြောတော့
ပေါင်းနေသလို Past က Past ပါ။အခုပြောချင်တာကအနှစ်သာရအရဖြစ်သင့်တယ်လို့ယူဆလို့ပါ။လူမျီုးစုတွေကိုက